Mitsva mifananidzo yeiyo iPhone 7 kamera | IPhone nhau
Mifananidzo mitsva yemakamera eiyo iPhone 7 uye ndangariro ye256GB
IPhone 7 pfungwa inogadzirwa nemugadziri wekushandisa
Ini handizive kana paine munhu anoda kuti ive yakadaro, asi kwemakore Apple haana kuchengeta chakavanzika nezve iyo inotevera iPhone kuzoratidzwa ichave yakaita sei. Nenzira iyi, kunyange hazvo pasina chinhu chakasimbiswa kusvika pakuratidzwa, zvinoita sekunge isu tatoziva izvo iyo iPhone 7 uye chimwe chezvinhu zvinonakidza zvitsva zviri mune mbiri kamera iyo inongove iripo mu iPhone 7 Plus.
Ndiani arikudonhedza zvimwe zvikamu zveinotevera iPhone ndiyo Twitter account OnLeaks. Nezuro, mupepeti weNoWhereElse zvakare akasefa mimwe mifananidzo mitsva yatinoona ma module maviri e makamera, mumwe wavo aine lens mbiri, iyo inofanirwa kunge iri yeiyo iPhone 7 Plus / Pro, uye imwe iine lens, izvo zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti ndiyo yavanoshandisa iyo 4.7-inch modhi. Asi iyo mifananidzo inotorawo chimwe chinonakidza chikamu: ndangariro dzekuchengetedza.
Pachave paine 7GB iPhone 256?
Panguva ino, uye tichifungidzira kuti iyo mifananidzo iri yechokwadi, isu tinofanirwa kupa iwo mamwe akaipa nhoroondo yemakore ese: iyo yekupinda modhi ichaenderera iine 16GB ndangariro, kunyangwe isu tichigara tichivimba kuti idzi ndidzo ndangariro dzavari kuyedza mumidziyo yekuyedza. Izvo zvine chokwadi chekuvepo ndeyeiyo 64GB modhi, asi iyo mifananidzo zvakare inotiratidza isu yakakura kwazvo ndangariro iyo yanga isingawanikwe kusvikira zvino: a 256GB ndangariro.
Kana ari makamera, ruzivo rwakatanhamara rwandinoona mumifananidzo nderwekuti vakaisanganisirawo module yekamera ine lenzi rimwe chete, izvo zvaizosimbisa kuti chete iyo Plus / Pro modhi ndiyo ichave nekamera yakakosha. Chero zvazvingaitika, Mac Otakara akataura kuti mamodheru maviri aya achave neOptical Image Stabilization (OIS), kunyangwe akazodaro mumushumo waakavimbisa kuti hapana kana maviri eaya mhando anosanganisira Smart Connector, Chinhu chinopesana nekubuda kwezvazvino. MunaGunyana tichaona kuti ndiani akawana zvakafanotaurwa zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mifananidzo mitsva yemakamera eiyo iPhone 7 uye ndangariro ye256GB
Uye mutengo we1400 euros yeiyo 256 gigabyte PRO modhi (ndiani anoitenga?), Saka vapfumi…. Uye vateveri veApple (kuti ini handisisiri ...)
Indian mutambi anoudza Tim Cook kuti akamirira "Apple VR"